Kama fiicna ALOSBİ maalgashi la sameeyo Menemen Aliağa Çandarlı Highway | RayHaber | raillynews
[06 / 06 / 2020] Soojeedinta Saacadaha Shaqada ee kala duwan iyo Lane ka sooca gudiga Sayniska IMM	34 Istanbul
[06 / 06 / 2020] Wasiir Varank wuxuu Soo Bandhigay Xirmadda Baaritaanka Cilmiga 19	GUUD
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirKama fiicna ALOSBİ maalgashiga lala sameeyo Menemen Aliağa Çandarlı Highway
21 / 02 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
ma jiro wax ka wanaagsan oo loo yaqaan alosbi maalgashi la sameeyo jidadka waaweyn ee ragga iyo dumarka
Wadada 'Menemen-Aliağa-Çandarlı', oo la furi doono maalinta sabtida ah, ayaa bixin doonta xallin weyn oo ku saabsan dhibaatada taraafikada ee dhinaca waqooyi ee xarumaha warshadaha ee İzmir. Aliağa Chemicals Specialization iyo Aagga Wershadaha Aasaasaysan (ALOSBİ) Gudoomiyaha Gudiga Haluk Tezcan ayaa yidhi, "Waxaan noqon doonaa kuwa sifiican loo heli karo oo aan kula tartami karno jidkan weyn. Kaabayaasha, ma jirto wax ka fiican tahay in ay maal-Turkey ALOSBİ qaabka sare, "ayuu yiri.
Menemen-Aliaga-Çandarlı wayn, geedi socodka soo socda dalka Turkiga ayaa la qorsheeyey in ay dekedda weyn ee Port Candarli la dhexgelin doono. Guddoomiyaha ALOSBİ Haluk Tezcan, OIZ ugu weyn dalka Turkiga ayaa waxaa lagu tilmaamay in sida masuuliyad weyn.
Waxay leedahay muhiimad istiraatiiji ah
Tezcan wuxuu yiri, “Waxaan dejinay hadaf ah inaan sare ugu qaadno shaqada 60 kun oo qof isla markaana aan u dhoofinno 250 milyan oo Yuuro sanadkii. In kasta oo dadaalkeenna uu sii wato fidinta 10 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, maalgashigeennu wuu sii socdaa. Mashruucayaga Technopark wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo Güzelhisar Underway Dam ee 'biyaha', oo ah baahiyaha wax soo saarka ee ugu muhiimsan ee warshadaha, si loo taageero soosaarka iyadoo lagu saleynayo teknoolojiyadda horumarsan iyo hal-abuurka. Waxaan sidoo kale laba jibbaarmi doonaa awoodayada daaweynta biyaha laga bilaabo 3 mitir cubic. Nemrut Küçük Sanayi Sitesi, oo u shaqeeya sidii xarun suubin, ayaa la bilaabay waqti gaaban. Waxaan albaabada u furey aqoonyahanno warshadeed oo raba inay kobciyaan ganacsigooda waxaanan warshadaha u dhiibnay dhul 500 bilood ah. ALOSBI waxaa loo muujiyey inay yihiin OSB-ta ugu weyn iyo tan ugu wanaagsan OSB maalgashiga. Dhamaan arrimahani waxay muujinayaan sida ay masuuliyadeenu u weyn tahay. Dhanka kale, wadada weyn waxay muhiimad istiraatiiji ah u leedahay maalgashadayaasha. ”
Tezcan wuxuu tilmaamay in dhibaatada taraafikada ay baabi'i doonto marka wadada weyn iyo isku xirka ALOSBİ la howl gaabiyo waqti kooban. “Ma jiro meel ka wanaagsan maal gashadayaasha oo aan ka aheyn ALOSBİ. Waxaan hadda haysannaa wax walba si heer sare ah, biyaheena, korontoheena, shaqadeena, awooda wax soo saarkeena. Waqtiga iyo isticmaalka shidaalka waxaa lagu keydin doonaa wadada weyn. Isku xidhka heerka sare ee isku xidhka Aliağa iyo Çandarlı Port, gaadiidka culus ee magaalada waa la qaboojin doonaa. Dhab ahaantii ALOSBİ, waxay bixisaa fursad weyn marka la eego maal-gashiga dalka Turkiga la joogo. Iyadoo la siinayo adeegga ugufiican ee kaabayaasheeda iyo qaab dhismeedka suugaanta, ALOSBİ waxay sii kordhisay muhiimadeeda istiraatiijiyadeed ee wadadda weyn. ”
Go'aanka Dawladda ee Menemen Aliağa Candarlı
Qeybo ka mid ah Wadooyinka 'Menemen Aliağa Çandarlı' Wadada Wadada Waddo ayaa furey Gaadiidka
Wadada weyn ee Menemen Aliağa Çandarlı waxaa lagu furay xaflad
Ogeysiinta Qandaraaska: Aliağa-Çandarlı-Bergama Dhismaha Kaabayaasha Tareenka ee Cusub iyo Çandarlı…
Aliağa - Çandarlı - Bergama New Railway iyo Çandarlı Iskuxirka Tareenka Wadada…
Aliağa-Çandarlı-Bergama Dhismaha Kaabayaasha Tareenka ee Cusub iyo Dhismaha Dekada 'arandarlı…
Minibus Diyaaradaha ALOSBI oo ka yimid Aliağa IZBAN Station
Aliağa Menemen Çandarlı Wadada Wadada Toll Fee 2020
Aliağa - Çandarlı - Bergama Railway Project Korontada izasyon
Ogeysiiska Udhanka: Aliağa-Çandarlı-Bergama Mashruuca Xawaaraha Xawaaraha Sare Proj
Aliağa-Candarlı-Bergama wuxuu noqon doonaa albaabka dhoofka tareenka cusub
Kanal İstanbul Teknik İncelemesinin İkinci Raporu Yayımlandı
Bayaanka maddaarka garoonka diyaaradaha ee Erzurum waxaa qoray wasiir Karaismailoğlu
Yuusufeli Dam 3 Million oo Burcad Badeed Kabax
Aydın Denizli oo ah Wadada Wadnaha Gawaarida ayaa la hayaa 11ka Juun
Waa kuma Ayten Alpman?
Daaqad u socota Sky: THK Museum
Maanta Taariikh: 7 Juun 1939 Maamulka Tareenka Waddooyinka
Codsiyada TCDD Tababbarka iyo Xarumaha Madaddaalada ayaa Bilaabmay
Khadka Xeebta Konyaaltı 104 ayaa Bilaabay Socdaal
Cidhiidhi garowga Wadada Göllüce, Oo Lagu Balaariyay Howlaha GAZİRAY
Maalgashiga Erciyes ayaa la qorsheeyay
16 km oo waddo baaskiil ah ayaa laga dhisay 72 sano Kocaeli
Soojeedinta Saacadaha Shaqada ee kala duwan iyo Lane ka sooca gudiga Sayniska IMM
Ha taaban batoonka, Cross Health
Maskematic Placed In Guriga Degmada Izmir
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu qabtay kulan ku saabsan maalgashiga in loo sameeyo 2020 Erciyes, oo kamid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka aduunka. Duqa Magaalada Büyükkılıç ayaa yidhi, “Erciyeskeena [More ...]
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu süreçlerde de yıkım projelerine karşı mücadelesine devam etmiş, sorumluluğu gereği halkı bilgilendirmek amacı ile “Kanal İstanbul ve Yeni Şehir [More ...]
Turkiga UAV robot iyo HR oo La Siiyo
Turkiga, Waaxda Warshadaha Difaaca Madaxweynaha Jamhuuriyada Turkiga (SSB) oo kaashaneysa mashruucyo badan oo fuliyay Robot ayaa horumarin doona nidaamyada UAV iyo HR. Warshadaha Difaaca Madaxweynaha ee mowduuca [More ...]
Injineerka Guriga ee Nidaamka SDT ee ka socda T fromMOSAN
U wac Maalinta LPG World: Xulashada kaliya ee loogu talagalay mustaqbalka LPG
7da Juun Maalinta LPG World, oo ay ku dhawaaqday Ururka World LPG (WLPGA), si loogu soo jiito tirada baabuurta sii kordheysa, ayaa ah tan ugu nadiifsan shidaalka shidaalka ee LPG. [More ...]
Aasaaskii Aliağa-Bergama-Candarlı Founded
GUHEM waa kan ugu wanaagsan Yurub
Menemen - Aliağa Double Line Tareenka iyo Mashruuca Iskuxirka Nemrut Bay 2014…
Menemen-Aliağa ayaa laba jadwalka dhismaha tareenka iyo isku xirka Nemrut
Ma jiro garoon diyaaradeed Ma jiro garoon diyaaradeed Ma jirto tareen Ma jiro tareen
Menemen - Mashruuca Tareenka Wadada Labaad ee Alia Fora Loogu talagalay hindisaha dhismaha qaab dhismeedka, Abriil -…